MB 2016 Diseembar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Sannad walba markay tahay Disembar 25, Masiixiyada waxay u dabaaldegtaa dhalashada Ciise, Wiilka Ilaah, oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd. Kitaabka Quduuska ah ma lihi taariikhda saxda dhalashada. Dhalashada Ciise malaha ma dhicin xilliga qaboobaha markii aan u dabaaldegno. Luukos ayaa ku waramay in Emperor Augustus uu amar ku bixiyay in dadka deggan dunida oo dhan Roman laga diiwaangaliyo liisaska canshuurta (Luukos 2,1) iyo "qof walbaa wuxuu tegey in la qoro, mid walbana wuxuu aaday magaaladiisa", oo ay ku jiraan Yuusuf iyo Maria, oo xaamilo ahaa (Luukos 2,3-5). Aqoonyahanada qaar ayaa ku taariikhaysay dhalashadii Ciise ee deyrtii hore bedelkii xilliga qaboobaha. Laakiin iyada oo aan loo eegin goorta saxda ah ee maalinta dhalashada Ciise ay ahayd in la xuso dhalashadiisa, runti waa u qalantaa.
Diseembar 25-keedii wuxuu ina siinayaa fursad aan ku xasuusino daqiiqad cajiib ah taariikhda aadanaha: oo ah maalintii Badbaadiyeheenu ku dhashay. Waa muhiim in la xasuusto in dhalashada Masiixu uusan ku dhammaanayn sheekada kirismaska. Sannad kasta oo cimrigiisa gaagaaban, oo ku dhammaaday dhimashadiisa iskutallaabta iyo sarakiciddiisa iyo u kacidda jannada, Ciise wuxuu ku dhacey dhalashadiisa dhalashadiisa dhulka. Wuxuu dhexdeena ku dhex noolaa sannad ka sannad. Keligiis ima uusan imaan dhalashadiisa koowaad - wuxuu ahaa mid bani aadamka dhexdeena ku nool noloshiisa oo dhan. Isaga ayuu nala joogay dhalasho kasta oo noloshiisa ka mid ah.
Maadaama Ciise Masiix uu yahay aadanaha oo dhammi Ilaah buu yahay, waxaynu og nahay inuu si buuxda noo fahamsan yahay. Isagu wuu ina yaqaan gudaha; wuu yaqaanaa macnaha ay leedahay xanuun dareemo, qabow iyo gaajo, laakiin sidoo kale farxadda dunidan. Wuxuu neefsaday isla hawadii, wuxuu ku socday isla dhulka, wuxuu lahaa isku jir jir ah oo aan leenahay. Noloshiisa qumman ee dunidu waxay tusaale u tahay jacaylka qofkasta oo daryeela dadka baahan iyo u adeegida Ilaah.
Warka ugu wanaagsan ee sheekada masiixiga waa kan: Ciise waa jiraa! Cagihiisu mar dambe wasakh iyo xanuun bay leeyihiin maxaa yeelay jidhkiisii ​​waa ammaaneen hadda. Nabarradii iskutallaabta laga qaaday ayaa weli jira; astaantiisa ayaa ah astaamaha jacaylkiisa uu noo qabo. Iimaankeenna Masiixiyiin ahaan iyo hadafkeenna halkan GCI / WKG, waxaa lama huraan ah in aan haysanno u-doode iyo wakiil ka socda Ciise oo ku dhashay bini-aadamka, oo ku noolaa sidii qof bini-aadam ah oo ku dhintay bini-aadamka si uu noogu soo furto , Sarakiciddiisa waxay na siisaa kalsooni ah inaan annaguna dib u soo sara kici doonno oo aan ku soo dhoweyn doonno qoyska Ilaah maxaa yeelay isagu wuu inoo dhintay.
Mid ka mid ah aayadaha Axdiga Hore ee saadaaliyay dhalashada Ciise waxaa laga heli karaa Ishacyaah 7,14: “Saas aawadeed Sayidku calaamad buu kuu siin doonaa: Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu'eel. » Immanuel waa Cibraani macnihiisuna yahay “Ilaah baa inala jooga”, taas oo ina xusuusineysa cidda Ciise yahay. Isagu waa Ilaaha soo degay, Isaga dhexdeenna waa Ilaah, oo yaqaan dhibaatooyinkayaga iyo farxaddeenna.
Aniga ahaan hadiyadda ugu weyn Kirismasku waa xusuusinta in Ciise uu mar un yimid iyo dhammaan, oo aan u aheyn dhalashadiisa. Wuxuu noolaa sidii qof adiga oo kale ah iyo aniga. Wuxuu u dhintay bini aadam sidaa darteed waxaan ku heli karnaa nolosha weligeed ah isaga. Iyada oo loo maro incarnation (Jir ahaan) Ciise wuu inala midoobay. Wuxuu noqday mid inaga mid ah si aan ugu noqon karno qoyska Ilaahay oo isaga la jira.
Taasi waa udub dhexaadka farriintayada ee Grace Communion International / WKG. Waxaan rajeyneynaa maxaa yeelay waxaan leenahay Ciise, Wiilka Ilaah, oo ku noolaa dhulka sida aan hadda nahay. Noloshiisa iyo waxbaristiisa ayaa na siiya hanuun, dhimashadiisa iyo sarakiciddiisuna waxay ina siisaa badbaado. Waan midaysanahay maxaa yeelay waan ku jirnaa. Haddii aad ku taageerto dhaqaale ahaan GCI / WKG, waxaad taageersan tahay faafinta injiilka: Waxaa madax furasho inoogu noqday Ilaaha ina jeclaaday si uu u diro wiilkiisa keli ah oo ku dhashay bini aadamka, kuna noolaado aadanaha, anaga inuu u dhinto dhibbanaha si uu u kaco oo noo siiyo nolol cusub oo dhexdeeda ah. Taasi waa aasaaska xilli ciidaan iyo sababta aan u dabaaldegno.
Waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biirto bishaan si aan u wada dabaaldegno wixii aan si joogto ah loogu casuumay oo aan sameyno, kaas oo ah inaan la xiriirno Eebbe ina fahmayo. Dhalashada Ciise waxay ahayd joogteena Kirismaska ​​ugu horeysay, laakiin hadda waxaan u dabaaldegnaa dhalashada Masiixa sanad walba maxaa yeelay isagu wuu inala jiraa. Ruuxiisa Quduuska ahi wuxuu ku nool yahay dhamaan kuwa guuleeysta. Had iyo jeer wuu inala jiraa.
Waxaan kuu rajaynayaa kirismaska ​​barakeysan ee Masiix!